Opinions & Discussion » ဗွားဒေါ်နှုတ်ထွက်ပေးပါ… Out	15
nozomi says: သိုင်းပြောင်းပြန် ကျင့်နေတာ ဘယ်အဆင့်ရောက်ပြီ လဲ
ဇီဇီခင်ဇော် says: အကင်းမပါးတဲ့သူတွေ ဆိုတော့ နှုတ်ထွက်လည်း နားလည်မယ်မထင်ပေါင်
Alinsett @ Maung Thura says: ဟှ နိုင်ငံရေး လုပ်နေတာ…
အင်မတန် သတိကြီးကြီး ထားရသော…နိုင်ငံရေး လုပ်ကွက်တွေ လုပ်နေတာ.. အဆင့်မရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေလို အားတိုင်းယားတိုင်း ကွိစိကွစ ထပြောနေရမယ်လို့ ထင်သလား ။ ဟမ်… အခု အမေတို့က
ကျားငစဉ်းလှဲတွေနဲ့ သူသေကိုယ်သေ ပူးသတ်နေရတာ… .မြေခွေးလို ဝံပလွေလို ကောက်ကျစ်သားရဲတောမှာ မိန်းမသားတစ်ယောက်ပဲ မားမားရပ်ပြနေရတာ…
ခွီးးးး အမေတို့ အရိပ်အခြေကို အူးကြောင် သိတာတွေ အများကြီး
ဒါပဲ။ အဲ့ဒါကိုရော လက်ခံသလား ဦးကြောင်။ .အူးကြောင် က ဘေးထိုင် ဘုပြောပဲ…
.ပြိုင်တူတွန်းရင် ရွေ့ပါတယ်။ ဘုပြောနေမယ့်အစား တတပ်တအား လာတွန်းပေးလှည့်စမ်းပါအုန်း ။ လေနဲ့ တွန်းမနေနဲ့ အူးကြောင်… ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်ဘဲ ဘု ပြောနေရင်… ဘင်ဂါလီတွေနဲ့အတူ သွားနေ
.ညှောင်ညှောင်…. ဆိုပြီး ငါကွ ဒညင်းဝက်
ဒေါ်စုအမြန်နှုတ်ထွက်ရန်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကဲ ကွယ်
. ပြောပြကြပါဦး။ လူသိ လူတတ် သီဝရီ ဘဲရွတ်၊ လက်တွေ့ကွင်းထဲ ကျ
kai says: ဒါမှ မဟုတ်.. အာဏှာရလျင် ဘယ်လို မူဝါဒနဲ့သွားမည်.. ပြည်တွင်းရေး၊ နိုင်ငံခြားရေး ဘယ်လို ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှာလဲ နှုတ်က ပီပီသသ ပြောပြပါ။ ထဲထဲဝံဝံ မပြောချင်တောင် ဘယ်ဟာကို ဘယ်လိုသဘောထားမည် တိတိကျကျနှုတ်ကနေထွက်ပေးပါလို့ ဒီနေရာက ပြောခြင်တယ်..။
မြစပဲရိုး says: သူ ဒီလောက် ရုန်းခဲ့လို့ ဟိုဘက် က ဒီ လောက် တပ်ပျက် နေတာ မြင်နိုင်သားပါ။
မြစပဲရိုး says: Sorry … I seee … :-)))
kai says: ဒါက..နောက်နှစ် ၂၀၁၆နိုဝင်ဘာ ဒုတိယပါတ်ရဲ့အင်္ဂါနေ့မှာကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဟီလာရီကလင်တန်ရဲ့.. တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအပေါ်ထားတဲ့.. ပေါ်လစီ..။
အောင် မိုးသူ says: ကြောင်ကြီးကို ၀န်းရံကြ ပြီးရင် မဆလာနဲ့ချက်စားမယ်။
Wow says: တော်သလိုကျိလုပ်ကြတာပေါ့အေတို့ရယ်…. ဒါက ဘွားဒေါ်ဝါးရဲ့ နှုတ်ထွက် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 672
YE YINT HLAING says: အိပ်ချင်တဲ့သူက နှိုးရခက်သလို သိသိကြီးနဲ့ ပြောဆိုတတ်တဲ့သူကို တုန့်ပြန်ရခက်ပါတယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကြောင်ကြိးရေ
Ma Ma says: ဟိုတုန်းကတော့ နှုတ် ထွက် စေချင်တယ်။
zarlay says: အမေ့ကိုနှုတ်ထွက်ခိုင်းတယ်ပေါ့လေ